Dagaal culus oo ciidanka dowladda iyo Al-Shabaab ku dhex maray Galgaduud – STAR FM SOMALIA
Dagaal culus oo ciidanka dowladda iyo Al-Shabaab ku dhex maray Galgaduud
Dagaal culus oo u dhaxeeyay ciidanka dowladda iyo Al-Shabaab ayaa xalay ka dhacay deegaanka Bud-bud ee Gobolka Galgaduud, kadib markii ciidankii Itoobiya ee AMISOM ay ka guureen shalay gelinkii dambe.
Dagaalkan oo qaatay muddo 7 saac, ayaa la isu adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, waxaana la sheegay inuu dagaalka ku bilowday madaafiic Al-Shabaab ku garaacday deegaanka.
Intaas kadib ayaa Al-Shabaab dagaal ku soo galeen deegaanka, waxaana labada dhinac waa ciidanka dowladda iyo Al-Shabaab dhex maray dagaal fool ka fool ahaa, kaasoo khasaare kala duwan geystay.
Dadka deegaanka ayaa sheegaya in illaa 10 ruux ay ku dhinteen dagaalka oo ay ku jiraan askar ka tirsan ciidanka dowladda iyo dad rayid ah, halka tiro kalena ku dhaawacmeen.
Lama oga khasaaraha Al-Shabaab ka soo gaaray dagaalka, hase ahaatee ciidanka dowladda ayaa markii dambe isaga baxay deegaanka Bud-bud, iyagoo u ruuqaansaday deegaanka Moqokori oo ka tirsan Gobolka Hiiraan, halkaasoo ay aheyd halkii ay qabteen Ciidamada Itoobiya ee fariisinka ku lahaa Bud Bud.
Deegaanka Bud Bud ayaa ciidamada Itoobiya u aheyd Talis ciidan, waxaana inta badan deegaankaas aheyd meelaha weerarada kaga qaadi jireen Al-Shabaabka ku sugnaa Galgaduud iyo Hiiraan.